Baiboly pejy 10 - Ny Baiboly
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Manaraka Farany
Jenezy toko 18 (tohiny)
27Fa hoy indray Abrahama: Indro efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho, izaho vovoka sy lavenona foana. 28Angamba ho latsaka dimy ny dimampolo marina; ka dia haringanao ve ny tanàna manontolo, noho ny dimy? Hoy izy: Tsy handringana azy aho, raha mahita olo-marina dimy amby efa-polo ao.
30Ary hoy Abrahama: Enga anie ka tsy hahatezitra ny Tompo, raha mbola miteny aho: Angamba telo-polo izy no ho hita ao. Dia hoy izy: Tsy hanao izany aho raha telo-polo no hitako ao. 31Hoy Abrahama: Indro efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho, angamba roa-polo izy no ho hita ao. Ary hoy izy: Tsy handringana ny tanàna aho raha roa-polo izy. 32Hoy Abrahama: Enga anie ka tsy ho tezitra ny Tompo, fa tsy hiteny intsony afa-tsy ity indray mandeha ity aho: Angamba folo izy no ho hita ao. Dia hoy izy: Tsy handringana azy aho noho ireo folo ireo. 33Lasa nandeha Iaveh nony tapi-niteny tamin'i Abrahama, ary Abrahama kosa dia nody.
30Niakatra avy tao Segora Lota, dia nitoetra tao an-tendrombohitra izy sy ny zanany roa vavy; fa natahotra ny hitoetra tao Segora. Dia nipetraka tao amin'ny zohy anankiray izy sy ny zanany roa vavy. 31Ary hoy ilay zokiny tamin'ny zandriny: Efa antitra ity ny raintsika, nefa amin'ity tany ity tsy misy lehilahy handeha amintsika, araka ny fanaon'ny tany rehetra, 32ka handeha hampisotrointsika divay ny raintsika, dia handry aminy isika, mba hananantsika fara mandimby, avy amin'ny raintsika. 33Ny alin'izay ihany, dia nampisotroiny divay tokoa rainy, ka niditra nandry tao amin-drainy ilay zokiny; tsy nisy hitany anefa, na ny nandrian-janany na ny niarenany. 34Nony ampitso, dia hoy ilay zokiny tamin'ny zandriny: Efa nandry tamin'i dada aho alina, ka handeha indray hampisotrointsika divay izy, anio alina, dia mandehàna handry aminy hianao, mba hananantsika fara mandimby avy amin'ny raintsika. 35Ny alin'iny ihany dia nampisotroiny divay indray ny rainy, ka niditra nandry taminy ilay zandriny, tsy misy hitany anefa na izay nandriany na izay niarenany. 36Ary samy nanan-janaka tamin-drainy ny zanak'i Lota roa vavy. 37Ny zokiny nitera-dahy izay nomeny anarana hoe Moaba, io no rain'ny Moabita mandraka androany. 38Ny zandriny koa nitera-dahy izay nomeny anarana hoe Benamy; io kosa no rain'ny taranak'i Amona mandraka androany.
4Mbola tsy nikasika an-dravehivavy anefa Abimeleka ka namaly hoe: Tompo ô, hovonoinao va ny olona na dia tsy manan-tsiny aza? 5Moa tsy nolazainy tamiko hoe: Anabaviko io? Ary ravehivavy koa nilaza tamiko hoe: Anadahiko izy. Ary fo mahitsy sy tànana madio no nanaovako izany.
Pejy: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Manaraka Farany